Guqula i-UTM iququzelele ukuya kwi-Excel-Geofumadas
NgoFebruwari, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Iiphotography, Ukulanda, Google umhlaba / imephu
Kwiposi langaphambili sasibonise iphepha le-Excel ukuguqula izilungiso Indawo yeUTM ukusuka kwiphepha uGabriel Ortiz ayeye lalisa.
Ngoku Khawucinge isixhobo wenza inkqubo efanayo in reverse, okt ukuba uqondisa UTM (Universal Traverso kweMercator) ifomathi kunye nokwazi ndawo, yaye ezinezinga ngokweendawo nokuguqula ubude.
Masiqalise familiarizing thina nale: njengoko Google Earth, uququzelelo le Palacio de los Deportes e Mexico wayeza kuba X = 489513.59, Y = 2,145,667.38 ucinga ukuba Google Earth isebenzisa njengoko Datum WGS84. (Kuba ukuba abazi, ukuze ubone UTM iququzelela ukuba izixhobo kuphela / iinketho / vista3D / zibonisa lat / ubude)
Xa zika geographical, oku kuya kuba Long = -8 ° -5 '-59 "lat = 19 24 °' 18" (ukubonisa lombane kwi Google Earth uba "nembono / Grid»)
Ndiyancoma ukuba uzifunde ngale ndlela yokujonga nokuqonda indlela i-UTM iqondisa ngayo umsebenzi ukufumana uncedo kakhulu kwisixhobo kwi-Excel.
Endenzileyo eli phepha Oku kuya kuba luncedo kumhlobo onokudlula ixesha elithile wayefuna ukuthumela kwiGoogle Earth enye idatha e-UTM.
1 Indlela yokufaka idatha
emasimini Yellow kuqokelela uququzelelo XY; kananjalo ndawo, oku kufuneka kube ngokwaneleyo ukuze anyamekele umzekelo Mexico, iindawo ukusuka 16 21 uququzelelo efanayo ukuze ube kwiindawo ezahlukeneyo.
Oku kwenzekayo kunye ne-hemisphere, njengokuba kunjalo neColombia, i-Ecuador kunye neBrazil eneendawo kwindawo zombini ezisenyakatho naseningizimu.
Kwakhona kwinqanaba eliphezulu yi-spheroid yesalathisi apho i-UTM iququzelelwe khona, oku akukho ukulungelelanisa iziphumo kodwa kunokuba ulungelelaniso lwongeniso.
Iikholamu eziluhlaza zilungelelaniso lweendawo, izilungelelaniso empuma ye-Greenwich meridian ziya kuba zilungile, abo basempumalanga basentshona baya kuba nebizo.
3 Indlela yokuyithumela kwiGoogle Earth
Sasivele sibone ezinye iindlela zokuthumela iifayile ezigqithiseleyo kwiGoogle Earth, zombini kunye ne-UTM, ngoko jonga, ukuba ufuna ukuthumela izilungiso ze-UTM kwi-AutoCAD, le template ye Excel ikuvumela ukuba ukwenze.
Apha unokukhuphela itemplate ukuguqula ulungelelwaniso lwe-UTM kwiJografi.
Ungayithenga kwikhadi le khredithi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-template ye-Excel ukuguqula ukusuka kwi-Geographic Coordinates ukuya ku-UTM
Post Next Ndifuna ukubeka ibhulogi yeemifanekiso, obani ukubhala?Okulandelayo »
Iimpendulo ze-109 "Guqulela uququzelelo lwe-UTM luye kwii-geographic coordinates kunye ne-Excel"
UJose Solorzano Pinto uthi:
Zonke izimvo zangaphambili bezinemihla edlulileyo, yanamhlanje uSeptemba wonyaka ka-2020, njengoko zinjalo iinguqulelo, itekhnoloji yelo xesha yahlukile kumhla wanamhlanje, ngaba iya kuhlala isebenza, ngaba kukho umahluko?
Siyithumele kwi-imeyile yakho. Ngokuqinisekileyo wayeye kufolda engafunwayo.
Javier Galofre uthi:
Ndandithenga umzekelo kodwa akukho nto ifike kum. Ngaba nceda ukhangele ukuthunyelwa kwesi sikhulu?
Ngendlela, ndiyifumene le webhusayithi kwaye ndinomdla. Kusafuneka ndiphulukane ithutyana kuyo, kodwa ikhangeleka intle.
Andifumani ndawo yokuyikhuphela…. Is Iphi le tafile intle kangaka?
LUIS LARA uthi:
Andiboni apho ndingayinciphisa khona !!
Ngaba unokusinika umzekelo?
Ndingathanda ukwazi ukuba kutheni xa ndijoyina i-geografia efanayo ndivota iziphumo ezahlukeneyo umzekelo
Efrain Peña Borda uthi:
inkqubo q for Vista okanye Excel Windows angasebenzisa ze download ukuguqula caba likwajongana ngokwezelizwe okanye viseversa, ndiyabulela kuwe kwangaphambili ngenxa ingqalelo yenu oku.
UJonathan Cardiel uthi:
Ngokuqinisekileyo, kuninzi kunoko.
Ndingathanda ukwazi ukuba ngaba itafile yakho ndiyakwazi ukuguqula (ukusuka ku-UTM ukuya ku-GEOGRAPHIC) abaninzi banxibelelana ngexesha elifanayo. Uninzi lufana ne1000.
Ndilindele impendulo yakho ngokukhawuleza, mbulelo.
Asinayo itemplate yokuguqula iGTM kwi-UTM.
pedro luis patino uthi:
Ndinomdla kwi-template ye-exel ukuguqula i-GTM i-UTM NAMAFOMO
Nceda undithumele inombolo ye-akhawunti yexabiso leemplates
U Ernesto uthi:
Sawubona, ndine-spreadsheet ye-excel yokuhamba ukusuka kumadridi aphezulu ukuya kwiiyure, imizuzu, imizuzwana.
Fumana kunye nam
Ndiyabulela intando, ndiya kubona ukuba yintoni enye ifom yeyona ntlawulo efikelelekayo endiyakwenza ngayo.
Akukho ngxaki, ithemplate iqulethe iikholomu apho isekela ukuba uyifake kwifomati yedesimali.
Xa uthenge, udibana nathi kwaye siya kukuxelela indlela yokwenza ngayo.
Sithandwa, into endiyifunayo kukuba ndikwazi ukuzoba igrafu iziququzeleli kwiMicrosoftStation V8i, kodwa i-HandHeld yam ndiyibambile kum idigri ye-LAT W89.14298 N13.71391, kwaye kufuneka ndibaguqulele kwi-XY, itemplate ebalaseleyo bayicele kwiDegrees, imizuzu kunye neBanga lesibini.
Unokundinceda nale nto? Ndiyabonga
Okokuqala, mbulela ngomdla wakho.
Khangela oko ukhangeleyo, njengoko le template iguqulwa ukusuka kwi-UTM ukuya kwimihlaba kodwa kukho ezinye iithemplathi eziqinisekileyo ukwenza oko ufuna.
Khangela kwesi sixhobo nezinye iimodeli ezikhoyo.
UMBUZO ONGAKUBA UKUFANELELA INKQUBO YOKUPHATHA INKCAZO YOKUPHATHA UKUPHATHA KWENKCAZO KUNYE NOKWENZA KWEENKQUBO.
Hayi. Elinye kweli nqaku linokuguqula kuphela ukusuka kwi-UTM ukuya kwiJograograph.
Kodwa enye malunga nale nqaku ukuba unokwenza oko ufuna
VICENTE DU uthi:
Ungasebenzisa ispredishithi ukuguqula izilungelelaniso zeendawo
I-UTM inxibelelanisa kwaye
Gustavo Hernandez uthi:
Ndinicebisa page lam, kukho inkqubo esekelwe kwi-methodology of Gabriel Ortiz exe ayisosinyanzelo kodwa ndiyathanda ukuba naziphi na izimvo, ndiyathemba ukhonza, uyabulisa.
Ndingaguqulela njani ukulungelelanisa i-UTM ukuya kulungelelaniso lweendawo?
Ewe, ithemplate isebenza ngaphandle kweengxaki
Ukuba usishiya umzekelo, siyakwazi ukuphonononga.
Zithini izinto zokudibanisa ongene kuzo, yeyiphi le ndawo, zeziphi iziphumo ozisa zona, leliphi ilizwe ekulo kwaye sijonga ukubona ukuba kwenzeka ntoni. Sukuba ngumcimbi wokwahlulahlulahlulwa kwamawaka amawaka okanye iidiyali.
Sawu, ndithenge i-spreadsheet, ndibeka izilungelelaniso ukuba ndiguquke kodwa zandithumela kweli zwekazi. Kungenzeka ukuba kungenxa yendawo, kule fom ibeka indawo ye-15, eChile apho kufuneka ndibeke khona indawo?
Sawubona Shaviola, apha senze i template eyakuthandayo
Akukho template kwi-Geofumadas efana nale uhlala kuyo. Inye kodwa into eyenzayo kukuphindaphinda, iguqulwe ukusuka kwiidigri ukuya kwi-decimals
Sawu, ndifuna ukuguqula izilungiso kwiimigangatho zamadesimali ukulungelelanisa kwiidrees, imizuzu kunye nemizuzwana.
Ngokuqinisekileyo ukulungelelanisa kwakho Kwaye kubi, kuba i-latitude iqala e-Ecuador kwaye xa ifika kwi-El Salvador linani elihamba ngaphezulu kwesigidi. Yijonge kuba kubonakala ngathi ikho ingxaki.
Kukuba kweli lizwe ukwahluka kobude kumanqanaba ayahluka phakathi kwe-87 ° kunye ne-89 ° kunye nobubanzi phakathi kwe13 ° ne-14 ° lilizwe elikuMbindi Merika
X = 439188.2040 kunye neY = 316859.3910
Ewe kodwa asizokwazi ukuba sithini. Uyazi njani ukuba kufuneka unike?
Yiyiphi iDatum oyisebenzisayo?
Bhala apha ulungelelaniso ngamamitha, kwaye siya kuvavanya umguquleli wethu ukuze sibone ukuba awukhathaleli.
jonga, sebenzisa i-converter eguqula umda ukusuka kwiimitha ukuya kwiidigri kwaye iziphumo endifanele ndizinike i-89 ° ubude kunye ne-13 ° ubude, kodwa yandinika i-89 ° kunye ne-2 ° latitude isebenzisa i-16 zone kunye ne-hemisphere esemantla entshona.
RAUL MACIAS VALDEZ uthi:
kukho uguqulelo lwentliziyo kaGoogle olwamkelayo lokufaka amanqaku kunye nokulungelelaniswa kwe-UTM yi6.2.1.6014 (beta)
Ucofa kwikhonkco ethi:
Okanye kwiqhosha elithi "Thenga ngoku"
ULuis Gallardo uthi:
Andikwazi ukufumana indlela yokuthumela iiRandi ze-2 kwaye ndifuna ukukhuphela ukuba idibanise ifomu yokuguqula ngokukhawuleza.
Ngokuqinisekileyo, yihla kwi-mesh. Iyafumaneka apho.
Kulungile kwaye ikhona na indlela yokufumana imephu yeVenezuela endixelela ukusuka kweliphi inqanaba okanye iindawo?
I-REGVen WGS84 ifana ne-UTM WGS84
Hayi, ndinokungabaza. Izilungiso ze-UTM zifana ne-REGVEN? kukuba ndifuna ukwazi indawo iVenezuela eyahlula ngayo, unokundinceda ngelo nceda?
Ngamanye amaxesha kunokwenzeka ukuba ukhuphelo uyeke, okanye iProxi apho uqhagamshela khona iibhloko ukhuphelo. Nangona kunjalo, ukuba oku kuyenzeka, ungakwazisa ngeposi.
heeeey hlawula i-2 yedola kwaye ungandivumeli ndikhuphele iitemplate ezilungileyo
Imisebenzi nayiphi na indawo
Ndithetha indawo eyi-14 okanye isebenza ngayo yonke imimandla
Uthetha ntoni i-14?
Ngaba ezi ndlela zisebenza kwi-14?
Ayikwazi, iGoogle Earth ayamkeli ukulungelelanisa igalelo kwifomathi ye-UTM. Eyona nto isebenzayo kukuba uyenze nge-GIS inkqubo efana neMicrostation, gvSIG okanye QGis, emva koko uyithumele kwelinye icala le-kml ukuyibona kuGoogle Earth.
Enrique Arizabalo uthi:
Hayi, khangela, ndinomdla kwiingqungquthela. Ndingathanda ukwazi ukuba ndifaka njani i-intsebenziswano yam udibanisa kwi-Google Earth kwangaphambili, i-Gracesco, uncedo.
Molo Miguel. Malunga nombuzo wakho:
-Iziququzeleli eziboniswa nguGoogle Earth kunye nezo ubhekisa kuzo ziyaziwa njenge-UTM. Le nkqubo yokwahlula ilizwekazi kwimimandla ye-60 eyahamba ipali ukuya kwisipoliti, i-6 degrees nganye. Kwindlela eya eMpuma, indawo nganye ine-500,000 njengeyona ndawo iphakathi yokuma kwaye yanyuka okanye iyancipha de ifikelele kumda womda, ngoko ke ukulungelelaniswa kwe-East kuyaphindaphindwa kwindawo nganye, kodwa akuhlali kungathandeki. Ngombono osemantla, iqala nge-zero ukusuka kwiikhweyitha, ukuya kwisibonda esisezantsi nakwi-hemisphere esemazantsi ukuqala kwisibonda ide ifike kwiikhweyitha.
Le nkqubo ibangela ubunzima kumazwe abandakanyeka kwiindawo ezingaphezulu kwesinye, kwimeko yeColombia iphakathi kwe-17, 18 kunye ne-19 imimandla. Ukongeza, inobuqaqawuli bokuba necandelo kumantla hemisphere kunye nenye kwi-hemisphere esemazantsi.
Ngoko amazwe anquma ukukhetha imvelaphi yamanga, ukunciphisa ubunzima beli, kwaye yikho kungenakwenzeka ukuba idibeneyo ihambelane nalabo aboniswa yiGoogle Earth.
Ukwenza ukuguqulwa, i-Geographic Institutes ineenkcukacha ezifana nale:
Unokujonga kwakhona ezi zixhumanisi:
Xa ungena kwiphepha lewebhu, kuba ndandifuna ulwazi loqhagamshelwano ukuba mna ngcaciso engezansi:
Imephu yaseCoolombia elungiselelwe yi-IGAC (i-Instituto Geografico Agustin Codazzi), izilungelelaniso zeemephu ezikhankanyweyo azihambelani kunye neendlela zokulungelelanisa imephu yeGoogle Earth:
Umzekelo, uququzelelo imephu Colombia, ukufumana indawo ngqo ukuba nje kumzantsi Puerto Wilches 1021223E, 1302614N Ezi uququzelelo abakwazi ukufumana i imephu Google Earth, eyenza lo mahluko?
Ukongeza, njengecala elinomdla wokuthatha, kwimephu yeGoogle Earth, ngakumbi kwisebe le-Nariño kujongwa ukuba ii-organicates ezisuka eNtshona ziye eMpuma, sithatha imeko yeTumaco, ikwindawo ye-748650 E, ukuba siyaqhubeka nolungelelwaniso olufanayo ubheke eMpuma, kuyabetha ukuba xa ufika kwi-833969E kwaye utshintshe emva kwexesha ukuya kwi-166030E. Kuyenzeka ukuba kuGoogle uMhlaba usuka kwiikhweyitha uye emaNtla uqalise kwi-0.0, nangona kunjalo kwi-IGAC inolungelelwaniso lwayo ekhompyutheni.
Ukuqukumbela, yenziwa njani inguqu ukusuka kulungelelaniso lwe-IGAC ukuya kuGoogle Earth?
Ndiyabulela kwangaphambili ngokubambisana kwakho okubalulekileyo ekuchazeni imeko edidekayo.
lithathelwe kakuhle kakhulu umsebenzi Gabriel Ortis, ndasebenzisa e Win XP kodwa utshintshela W7 kwaye ndikwazi ukuqhubeka ukusebenzisa oko, kubalulekile kakhulu ukuba bachithe iingongoma kwifayile KML elifundeka google umhlaba, ukuba undinike i email ndithe ndathumela lithathelwe.
Ngokuqinisekileyo, vele ushiye imizuzwana engenanto.
ukuba andinayo imizuzwana ndiyakwazi ukuyiguqula ukuze utm ???
Oscar alvarado uthi:
isixhobo esikhulu sokwenza okufanayo ukuguqula izilungiso ze-UTM ukuya kwii-geographies
ARNALDO SALAZAR uthi:
Ndiyivivile ngokudibanisa amanqaku e-National Cartography yaseVenezuela kwaye inika isiphumo esifanayo. enkosi
Ndiyabonga kakhulu ngegalelo lakho.
I-Vitos, ukwenza ukuguqulwa kwi-back, okanye ukusuka kwi-Geographical ukuya ku-UTM ungabheka isixhumanisi se Geofumadas
Ndifuna ukuguqula le datha W 14 ° 51 '16.59 »YS 90 ° 51' 50.1» kwi-UTM
Eli galelo elikhulu, lisebenza ngokugqibeleleyo phantse kuzo zonke iimeko, kodwa kungumda weendlela. Ndiyabonga kakhulu ngokuwabelana ngayo kwiwebhu.
Ndiyabulela ukwabelana ngala macwecwe nabantu.
1 Giga Siyabulela ngegalelo kule blog, ngaphezu elihle, clickcidades (ceba siyavuyisana informatic !!) ayikwazanga download Excel spreadsheet ethile UTM, kodwa ikhonkco enikwe apha ayaba nako, okt UTM ngokokuhlala, ezinye umyalelo okhethekileyo? Ndiyabonga
victor ramirez uthi:
Sisixhobo esihle ...
Kukho abantu ngamanye amaxesha abakhohlakeleyo kwaye abathandanga ukwabelana ngolwazi lwabo kodwa ndiyabona ukuba unesisa ... enkosi ngesixhobo sakho ...
qhubela phambili ..
Ngokutsho kwesi sixhobo:
I-Google Earth isebenzisa ukucwangciswa kwe-cylindrical elula kunye neDatum WGS84
I-Argentina iquka indawo ye-18,19.20,21,22 ngokubhekiselele esi sixhobo
Ndimele ndibe nomfanekiso wesimo se-B. Njengaye, i-Argentina kunye namanqaku athathwe kwi-google emhlabeni, ngaba umntu uyazi ukuba yiyiphi i-spheroid ne-datum eyenziwa yi-Google Earth kwaye yintoni indawo yase-Argentina? Ukwenza i-georeferencing, u-Erdas undibuza loo datha.
Ngokuqinisekileyo, ngaphakathi eli qhagamshelo nguGabriel Ortiz Uyakubona amafomula.
Sawubona! Igalelo elihle kakhulu. Nangona kunjalo, ngaba unganinika i-formula ukuba ndiyenze kuphela nge-calculator?
Siyabonga! kunye nokubingelela eSpeyin!
Utm geographic inxibelelanisa isiguquli
Siyabonga, ingcinga efanelekileyo
Ndiyaqonda ukuba UTM, ukukhuphela uququzelelo kwitheyibhile Excel, ebonisa leyo ndawo yaye abe omhlaba well'll nabo kwezinye iinkalo, ukuba ngoko kwenzeka UTM kwezinye iinkalo, thatha i zika geographical kunye neerasentyisi waguquka UTM, ukukhetha elinye zone.
Hayi, ine-set data yedatha ethathwa kwi-XMUMX kodwa ndifuna ukuyitshintsha kwinqanaba le-16 ukuba ndiyenza njani
Phakathi kolawulo lwendawo kunye ne-UTM akukho mpazamo, kuyafana.
Ukuba ufuna ukuqonda imbono yokuguqulwa, uGabriel Ortiz uyichaza kule nqaku.
kuhle kakhulu ubuchule bakho, kodwa kufuneka ukwazi ukwenza njani na utshintsho, kodwa andiyi yedijithali mna ababeqondisa imveliso stoy umfundi zezilwanyana ukufunda nolondolozo lomhlaba namanzi, kulo mba I cela ukubonisa izibalo kwaye isigqibo impazamo phakathi kwezi uququzelelo mabini, hayi indlela yokwenza ngayo Ngaba unokunceda? Into ebaluleke kakhulu kukubala iphutha phakathi kweendawo zombini!
mbulela kwangaphambili !!
Umele ubone indawo ehambelana nayo kwiGoogle Earth, kuba eColombia i-17,18 kunye ne-19 zihambelana
Sawubona! Faka idibanisa yolungelelaniso lweendawo zelizwe ukuwadlulisela kwi-flat but the result I find not what I expected. Ndifuna ukuba utshintsho lweedolophu zaseColombia. Nguwuphi utshintsho endimele ndenze?
Sawubona! NgePlex.Mark! Unokusebenza kunye nenkqubo yoqhagamshelwano kwiGoogle Earth:
nceda! Omnye uyazi indlela endingahamba ngayo ukusuka ku-UTM ukuya kwiGeograficas (idigri) kodwa kwiimimiselo, kungekho ngemizuzu okanye imizuzwana.
Ngaba kukho na ithuluzi eligqithisayo elivumela ukuba ndiyenze oku?
Ndiyabulela ngexesha lakho, kwaye kwakhona kwakhona iiGofumadas ezinkulu!
I-Geofumadas noGabriel Ortiz, siyabonga ngomdla wakho ekuncedeni abanye! Ndabingelela ePeru.
GERARDO C uthi:
Umsebenzi olungileyo, enze YEARS ngolwazi YAKHO lilihle kunene ngokunyanisekileyo kuhle kakhulu, ndiya Ndinengxaki Ukuguqulwa uqondisa UTM okanye geographical A moya, oko kukuthi KUFUNEKA zicamange kwintsimi INYATHELO LIVE OKANYE Plane NGOKUSEKELWE BASE IDATHA IINGONGOMA entsimini NEFIZIKHALI UTM iququzelela okanye ZEKHOSI eendawo uzivale ukuqinisekisa uququzelelo UTM ELISANDA imposiso, OJALA angandinceda
Ubani onokuba nomdla ndiyishiye idilesi yekhasi elikuvumela ukuba ufumane ukulungelelaniswa kweendawo kunye ne-UTM yantoni na:
I-UTM Flayer iphelelwe yisikhathi, ezininzi iinkqubo zeZonum zenzelwe ngaloo ndlela.
Unokwenza ukuguqulwa kunye Ithemplate ye Excel
Umhlobo uOliver, i-NOD 32 ayikhululekanga ngaphezu kweentsuku ze-30. Ukuba ufuna iphepha ukuyithenga:
Ukuba ufuna i-antivirus yamahhala engapheliyo, zama uAvira
J. Oliver Garcia Rizo uthi:
Unokwenza unomdla wokufumana i-ESET NOD 32 untivirus, ndiyayixabisa.
Kukho inkqubo UTM Flyer, ukuba enze ezi inguquko ku google I wayinika kude, kodwa ubhubhile, Unokumnceda njani mna kunye brindarmelo, ngoko musa kubhubha.
ENicaragua, sisebenza kwi-16 kunye ne-17 Zone, umntu unokuncedisa.
Ndifuna ukufumana inkqubo ye-UTM Flyer ukuhamba ukusuka kwi-UTM i-NAD 27 Central ukuya kwi-Geografica kwi-Google Maps
Ndicinga ukuba oko kuthetha ukuba: iZone 18, x = 338552 y = 9065052 kwi-hemisphere esemazantsi. Yizame kwitemplate. Uya kuhlala kwidum
mauro jimenez nartel uthi:
Ndicela undincede NDIKUVULE UKUVIELWA KWEENKCAZO ZE-UTM KWI-DATA YOKUFUNDA KWI-GEOGRAPI
LENTSHONA LENTSHONA 18L0338552
I-UTM 9065052 YAMASIPALA
Ndiyabulela ngokundinceda ndifeze umsebenzi wam
Ummandla waseMzantsi Afrika uTM 9065052
Ndiye inkwenkwe i-imeyile evela Mario Sánchez isixelela ukuba ukuba kukhawulezisa umsebenzi wabo (ukufunda indlela emfutshane amadlelo ngu zomqala GPS-GPRS) kongezwe uthotho iitafile ukusuka ngeshumi ukuba sexagesimal ngokuzenzekelayo yaye oku Isiphumo sifakwe ngqo kwi-template ye-geofumed eboniswa kule post.
Kuye kwongeza iifomula ukubala umgama phakathi kokuqhagamshelana ezimbini kwaye ukuba unayo ixesha lokuthatha iinqununu ufumana isivinini sokuhamba.
Wayecinga ukuba mhlawumbi kunokuba luncedo kumntu ngoko wayithumela kwaye apha banayo ifayile kunye nezicwangciso.
Khangela i-nomenclature ukuba i-calculator Gabriel Ortiz icele
I-434156.35 4804758.33 102.44 (indawo nganye kumgca, kuqala i-X kwaye i-Y. I-Z ikhetho.)
Sebenzisa indawo engenanto okanye ithebhu ukwahlula izicwangciso ze-X kunye neY, kwaye kwimeko yakho Z.
Ukuba ubeka i-comma, oku kukukhathazayo.
JAVIER CRUZ uthi:
Ndifuna ukuguqula i-X, i-Y izilungelelaniso ukuya ku-UTM
Ndingenise idatha kwi-CARTOGRAPHIC COORD CONVersOR ye «Gabriel Ortiz». kodwa ayizilahli idatha endithelekisa ngayo.
Idatha zilandelayo: X = 622,552.17 / Y = 2,062,181.26
Idatha ekufuneka ibuyisiwe yile: N 64 ° 24 '46.02 ″ E
kodwa ayiphumeli xa uyifaka.
I-HUSO engena kuyo yi: 15 ehambelana neCampeche, Mex.
Ndiyabulela ngoncedo kwangaphambili.
Umguquleli obalaseleyo kunye nendlela yokufundisa engcono kakhulu kunokubonga lo msebenzi omkhulu. mbulela kakhulu
Luis Felipe uthi:
le ndlela yindlela yokufundisa. nceda uthumele kule imeyile. mbulela kakhulu
Oku kuhle kumfundi onjengaye. kuwe Ngaba ungandithumela ngomusa kule imeyile? Ndiyabulela kakhulu kwaye ndinqwenela kakhulu ngezo mfundiso ezizilumko.
Anahí, esi sithuba bonisa umzekelo owawucelile, ukusuka kumabini asezantsi kunye neBolivia
Ukuba ufaka kwiMenu / I-Grid / Grid imiba ibonakala, ngokude nje usebenze i-UTM kwiThuluzi / Khetha / i-3d View.
Nguwuphi umsebenzi omhle, unceda kakhulu, umbuzo weBolivia njengokuba ubonisa ukuhluka kwe-UTM kwi-19, 20 kunye ne-21.
Ndifuna ukuba uncede ndifumane igrafu ukubonisa abafundi abaququzelele kwingingqi nganye.
UCarlos Flores uthi:
Siyavuyisela, ngokwenene isixhobo esihle kakhulu nomsebenzi omhle.
Okokuqala ndivuyisana nawe ngemisebenzi eyahlukeneyo oyenzayo okwesibini kwinqanaba lokubonelela ngolwazi lwakho 'kwabanye abantu, abafana nam, abaswele ulwazi oluninzi, ngaphezulu kwezizathu ezaneleyo zokuya phambili